U-Olimpiu Tuns, uMbhali kwi-Funda ukuRhweba
umbhali: IOlimpiu Tuns
U-Olimpiu Tuns uthweswe isidanga se-Master kuLawulo lwezoShishino kwaye uneAnalyst / uMrhwebi / uMqeqeshi onamava onamava kwiminyaka eli-10 yamava kwiimarike zezemali ezinobungcali kwi-Forex, Commodities, Index, Cryptocurrencies, nakwiStock.
Usebenze njengoMhlalutyi weNtengiso kwiinkampani ezintathu ezinkulu zabarhwebi, njengomrhwebi wepropu, nanjengegalelo / umyili womxholo kwiiposti zeendaba kunye namaqonga ezemfundo.
I-USD / ZAR pair yayikwisigaba sokulungisa emva kokufikelela kwinqanaba le-16.364. Iye yehla kakhulu kwinqanaba le-15.734 namhlanje apho ifumene inkxaso kwaye ngoku izama ukubuyela phezulu. Ngokusisiseko, i-USD ifumene uncedo oluvela kwi-US ADP Non-Farm Employment Change exelwe kwi-534K ngaphezulu kwe-525K […]
I-EUR/CAD imiphetho ephezulu emva kokuphelisa ukurhoxa kwayo okuncinci. Kwakhona, ikwazile ukuvala isithuba esibonisa ukuba iinkunzi zenkomo zomelele kwixesha elifutshane. Nangona kunjalo, kwixesha elifutshane, isibini sifikelele kwinqanaba lokuchasa, ngoko ke siya kufuna ukugqabhuka okusebenzayo ukuze sifumane isiqinisekiso sokuba siya kuba nokuqhubekeka. Namhlanje, i […]
NgoLwesine, Novemba 25, 2021
I-GBP / JPY ibini ihamba ecaleni phakathi kwe-154.21 kunye ne-153.49 ye-pivot yeveki. Ngexesha elifutshane, i-Yen iqalile ukuxabisa ngokuchasene neentshaba zayo njengoko iJapan Yen Futures izama ukuphinda ibuyele. Kwakhona, i-JP225, i-Nikkei ibonakala isengozini, ukuhla okunokuthi kubonise ukukhula kweYen. Ngokusisiseko, iYen ifumene uncedo oluvela […]
NgoLwesihlanu, Novemba 12, 2021
I-GBP / JPY yayikwisigaba sokulungisa kodwa ngoku kubonakala ngathi ukuhamba kwezantsi kuphelile. Yiyo loo nto besinokukhangela amathuba amatsha okuthenga. Nangona kunjalo, sifuna isiqinisekiso ngaphambi kokuba sithathe ixesha elide. Ngokobuchwephesha, isibini sisephantsi koxinzelelo, ngoko sinokubuya sivavanye kwaye siphinde sivavanye amanqanaba okuxhasa kwangoko. I […]
I-EUR/JPY Ukuvavanya kwakhona abathengi!
NgoLwesine, Novemba 11, 2021
I-EUR / JPY iyaqhubeka nokuhlala ngaphezulu kwe-130.74 umqobo wecala, ngoko ngokobuqu, ndiya kukhangela amathuba amatsha amade. Isibini semali sehla ukuze sivavanye kwaye siphinde sivavanye indawo yenkxaso. Ipateni ye-bullish apha ingenza umlenze omtsha usebenze phezulu. Ngexesha elifutshane, i-stock index ye-Nikkei yayikwisigaba sokulungisa, yiyo loo nto iYen [...]
NgoMvulo, Novemba 8, 2021
I-USD / CAD isibini sithengisa ngokubomvu kwinqanaba le-1.2450 ngexesha lokubhala. Uxinzelelo luphezulu njengoko i-Dollar Index iye yandisa ukuhla kwayo. Ngokobuchwephesha, ixabiso limi ngaphantsi kwamanqanaba okumelana okuqinileyo, ngoko ke ukukhula okuqhubekayo akuqinisekanga. I-USD yehle kancinci ngexesha elifutshane nokuba i-United States […]
I-USD / CAD isibini sibonakala singenasiphelo kwixesha elifutshane, mhlawumbi abahwebi balindele idatha yezoqoqosho yase-United States ngaphambi kokuthatha inyathelo. Ngexesha elifutshane, uxinzelelo oluphezulu luhlala lunjalo njengoko i-Dollar Index inokuqalisa ukukhula kwayo emva kokuhlehla kwangoku. I-US ISM Manufacturing PMI inokuzisa ubomi kwi-USD / CAD. […]
I-USD / SGD pair ibonise iimpawu ezigqithisiweyo kwaye ngoku ilwa kanzima ukunyuka phezulu. Isenzo sexabiso siphuhlise unxantathu we-symmetrical onokuzisa amathuba amakhulu okurhweba. Ngokusisiseko, i-USD yonyuswe ngcono kunedatha ebilindelwe yase-US ebixelwe izolo. I-CB Consumer Confidence ixelwe kwi-113.8 kude ngaphezulu kwe-108.4 ebilindelwe, ngelixa […]
I-GBP/USD yokuQhubela iPhatheni phantsi koPhuhliso!
I-GBP/USD pair yehle kancinci kodwa i-bias ihleli. Isenzo sexabiso sishicilele ukubunjwa okuqhubekayo okuqhubekayo. Ukuqinisekisa olu qulunqo kungabhengeza ukuqhubela phambili. Nangona kunjalo, kuya kufuneka silinde ukuqinisekiswa olomeleleyo ngaphambi kokuthatha ixesha elide. Njengoko sele usazi, i-Dollar Index iphunyukile kwindlela esezantsi yomqondiso […]
Ixabiso le-GBP / i-USD lalikwindawo yokuphumla yethutyana emva kokuthatha uxhathiso olukhulu olutshintshayo. Aba babini banokutsiba phezulu emva kokwehla kwangoku. Isenzo sexabiso sibonakalise ukuba ukwehla kwexesha elifutshane kuphelile kwaye iinkunzi zeenkomo zingathatha ulawulo olupheleleyo kwakhona. I-GBP / USD iya kuqhutywa […]
← Entsha izithuba1 2 ... 12 abaDala izithuba →